Indawo yokuhlala yaseMunroe Island Backwaters 1 - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseMunroe Island Backwaters 1
Ikamelo e-indlwana ibungazwe ngu-Vijeesh
Indawo yethu yokuhlala yendabuko iyindawo ethule, eluhlaza futhi eshisayo eseduze nomfula. Sinamagumbi angu-5 atholakalayo, wonke akhiwe ezakhiweni eziqhelile ekhaya elikhulu futhi eza anemibhede ephindwe kabili, abalandeli, amanethi omiyane nezindlu zangasese zangasese. Kuyisiqhingi esihle esigcwele imvelo.
Woza uzozibonela umhlaba wendabuko wase-Munroe Island
Woza uhlale nathi!! Siwumndeni wabantu abane. Sinamagumbi angu-5, wonke anamagumbi okugeza anamathiselwe ukuze uwasebenzise. Kunemibhede engamawele emakamelweni okulala kanti amagumbi okugeza anamashawa namathoyilethi asentshonalanga. Umama wenza ukudla kwe-Keralan okuphekwe ekhaya okumnandi kakhulu futhi kutholakala ngentengo ephansi kakhulu. Izivakashi zami zihlala zincoma ukupheka kukaMama. I-Munroe Island iyindawo ethule kakhulu, egcwele amandla amangalisayo nezinyoni nezimbali ezimangalisayo kakhulu. Mina, vijeesh, ngilapha ukuze ngikubonise isiqhingi, noma uhambo olumangalisayo lwe-backwater canal. Woza uzojabulela izinto eziningi ezinhle zamasiko kulesi siqhingi. Kunesiteshi sesitimela esiqhele ngekhilomitha elingu-1 ukusuka endlini esizokuyisa noma yikuphi lapho udinga ukuya khona; izikhumulo zezindiza noma eduze namadolobha.
Ngifisa ukukubona maduze. Uma unemibuzo sicela ukhululeke ukuxhumana nami.
Ngilapha nganoma yimiphi imibuzo. Woza uzoxhumana nomndeni wendawo. Umama wenza ukudla okumnandi, futhi mina noma ubaba singakuthatha sithathe uhambo oluya emanzini.